Fenicha yemukati, kuvimbiswa kwemhando
Sofa pamubhedha, sofa, vanodzokorora, chikamu sofa, godo uye mubhedha chimiro neNhasi, Europe, Chesterfield maitiro
Kupfuura 35 makore eiyo yakavimbika ODM & OEM ruzivo
Baotian fanicha Co, Ltd. yakavambwa mukati 1985 uye inowanikwa muShunde, Foshan guta, Guangdong mudunhu. Isu tinofukidza nharaunda ye 50,000 mativi metres uye guta rakanyoreswa nezve 2 mamirioni USD.
Baotian sofa mibhedha inogadzira yakave nyanzvi mukugadzira sofa, mubhedha wesofa, magetsi anonamira, godo nemubhedha chimiro. Isu tiri kubatana pamwe nehotera chirongwa, wholesale, nevatengesi.
U chimiro backrest ne yakakwira density foam iyo inoita kuti unzwe kunyorova uye inotsigirawo zvakare. Yakasviba grey velvet jira raizove nyore kuchenesa. Iyo yakarongedzwa armrests dhizaini inofanirwa kufananidza nehurefu hwakasiyana hwekudya tafura. Iyo yakasimba huni chigaro chigaro chinoita kuti sevhisi hupenyu huve hwakareba uye hwakasanganiswa dhizaini.
Chirungu maitiro L akavezwa machira pamubhedha imba yekurara yezvikamu sofa. Musanganiswa wepepuru, zverudo uye dzakanaka, mutambo wakakwana nekunakidzwa kubva mukuravira huswa hwewaini yemazambiringa. Anogadzirisa misoro inopa kune chako chaunoda, bvisa kana vabate pese paunoda. Stainless simbi furemu uye yakarongedzwa chitubu muhari chigaro inounza kuchengeteka uye inofadza kugara zvigaro kunzwa pamwe.
Sofa yeChesterfield ine chaise yedu yakareruka uye yakapfava imwe kupfuura vamwe, iyo inotora pane yakajairwa yakasarudzika Chesterfield sofa. Isu tinogamuchira dhizaina-yechinyakare dhizaini asi takaipa iko kwazvino kunzwa. Kubva pamhando yeChesterfield tufting, isu tinoedza kushandura chimiro chayo chekare chinorema.
Yemazuva ano chaise lounge sofa ine yakashongedzwa ruvara rwepepuru - simbe isinganzwisisike asi inyasha inodakadza. Tsoka dzakasimba dzemuti dzinopa rutsigiro rune simba. Kunzwa kwakanyaradza kunowana nzira yayo mukugara pasofa rakadai uchishandisa chitubu chehomwe & yakakwira-density chipanji.
Chesterfield Dhizaina Yakasarudzika Fabric Corner Couch, Dzazvino, Yakachena, uye Mufashoni. Chimwe chidimbu chikuru chehomwe coil chigaro cushion chakasununguka uye chakapfava. Dhizaina rinogoneka riri nyore kuchenesa uye kurongeka. Magoridhe esimbi mabhatani nemakumbo esimbi asina girazi anoita kuti gadzira sofa rive rakanaka.
3 seater jira pasofa mubhedha, neBelgium Brand Mechanism Bed Bed. Yakasimba yekutenderera pombi yesimbi, nehomwe yepasiketi yemvura: 143*195*12cm. Nhanho imwe yekuvhura mubhedha wesofa iri nyore uye nyore kubata.
Fenicha yehotera yechimanje yechimanje general use reversible seat cushions sofa bed.Sofa mubhedha uchishandisa pamusoro 500 American brand. Square pombi yekuteedzera matekiniki anopa yakasimba rutsigiro kuzadzisa zvinodiwa zvehotera dzakasiyana uye mhuri. Yakaenzana muhomwe chituru chematress: 90/130*185*12cm.
Yazvino Kona Sofa
Iyo yemazuva ano sofa rekona iri kuramba ichizivikanwa nekuda kwehukuru hwayo hunogadziriswa uye makona anodziya avanobatanidza. Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chinorova iyo chaiyo chiyero pakati pechaise nesofa rekona, funga fenicha yedu yeBaotian. Iyi sofa yakakura ine nzvimbo yakakwana yemhuri yese pasina kunyanyisa. Grey jira upholstery inowedzera kumwe kubata kwekugarika kune dhizaini. Kune akawanda emamwe anowanikwa sevelvet kana iwe usingafarire machira saka uve nechitoro chakatenderedza ...
Navy Blue Kona pasofa
Kana zvasvika kumasofa, sarudzo isingaperi ichagadzirwa mupfungwa dzako zvichibva pahukuru hwavo, chimiro, zvinhu, umhizha, nevamwe. Kune mamwe mataera kupfuura iwe aungafungidzira akatarisana nemhando dzakawanda kudaro. Zvisinei, Izvo zvinhu zvitatu zvekutanga izvo zvinosarudza setaini yesofa. Izvi zvinosanganisira maoko, kumashure, nemakumbo esofa, zvisinei kuti ndeyesofa yebhuruu yekona. Kunze kubva kumashure, maoko, siketi, chigaro, nezvimwewo, dzimwe tsananguro dzinopihwa kufungisisa nezveyevhuruu yebhuruu velvet sofa .....